Qorshaha Caafimaadka Apple - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Hadda oo daboolaya dhammaan WA
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waxay ku fidisay Apple Health (Medicaid) caymiskeeda dhammaan degmooyinka Washington.
Iska Diiwaangeli Hadda Horeba xubin
Faa'iidooyinka Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee daryeelka Washington
Saddexdayada qorshe ee kor loo qaaday waxay bixiyaan adeegyo kala duwan iyo faa'iidooyin ku habboon noloshaada.
QORSHEYGA CAAFIMAAD EE CHPW
Qorshaheenna Apple Health ayaa daboolaya caruurta iyo dadka waaweyn Ilaa da'da 64. Waxay ku siinaysaa dhammaan daryeelka aad u baahan tahay, iyo sidoo kale faa'iidooyin badan oo dheeraad ah oo ka baxsan Apple Health oo keliya.
Hel faa'iidooyin ➜
Haddii aad horey ugu jirtey caymis caafimaad barnaamij kale, waad heli kartaa caymis dheeri ah oo kaliya loogu talagalay caafimaadka maskaxda iyo adeegyada isticmaalka maandooriyaha.
Faa'iidooyinka BHSO ➜
CAAFIMAAD IYO CAAFIMAAD TUPH
Haddii aad u qalanto Medicare, laakiin sidoo kale aad buuxiso heerarka dakhliga ee Apple Health, labadaba waad heli kartaa. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa u qalmida labada.
Qorshaha u-qalma ➜
Maxaad u dooranaysaa CHPW?
Caafimaadkaaga ayaa inoogu horreeya annaga. CHPW waxay ku dhigeysaa xarunta daryeelkaaga.
Wax dheeri ah baro ➜
Waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho qorshaha saxda ah
Khubaradeenna saaxiibtinimada leh ee Apple Health waa kuwo aqoon leh oo waqti ku qaata inay ku bartaan adiga iyo baahiyahaaga caafimaad.
Na soo wac ➜
Ka bilow CHPW
Waxaan bixinaa helitaanka takhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha gobolka oo dhan. Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho adeegyada aad u baahan tahay, marka aad u baahan tahay. Waxaanan ku siinaynaa faa'iidooyin dheeraad ah si ay kaaga caawiyaan inaad dareento sida ugu fiican.
Ka raadi bixiye caafimaad bulshada deegaankaaga.
Halkan ka raadi ➜
U Qalmida Qorshaha CHPW
U-qalmitaanka Apple Health waxay kuxirantahay dakhliga. Baro inaad xaq u leedahay iyo in kale.
Shaxda u qalmida ➜
SU'AALO QORSHE AH
Wali raadinaya jawaabo? Hubi su'aalaheena inta badan la is weydiiyo.
Akhriso Su'aalaha ➜
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Nofeembar 11, 2021